Jubaland Archives - Puntland Mirror Believable Media Website
July 29, 2021 Puntland Mirror 0
Kismaayo-(Puntland Mirror) Afar xubnood oo katirsan xildhibaanada Jubbaland u matalaya aqalka sare ee Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa maanta oo Khamiis ah lagu doortay magaalada Kismaayo. Xubnaha la doortay ayaa waxaa kamid ah Cabdullaahi Shiikh Ismaacill […]
July 27, 2021 Puntland Mirror 0
Kismaayo-(Puntland Mirror) Madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayaa maanta oo Talaado ah soo gudbiyay qaar katirsan xubnaha musharixiinta aqalka sare, sida lagu sheegay qoraal kasoo baxay xafiiska madaxtooyada. Xubnaha musharixiinta oo madaxweynaha Jubbaland soo gudbiyay […]
November 24, 2019 Puntland Mirror 0
Kismaayo-(Puntland Mirror) Madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxmed Islaam ayaa maanta oo Axad u safray magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Waa safarkiisii ugu horeeyay oo dibada ah tan iyo markii dib loo doortay bishii Agoosto […]
November 21, 2019 Puntland Mirror 0
Kismaayo-(Puntland Mirror) Haayada nabadsugida iyo sirdoonka Jubbaland ayaa qabatay shabakad katirsan Al-Shabaab oo qaabilsanaa dilal qorsheysan oo ka dhacay magaalada Kismaayo. Howlgalka oo ka dhacay magaalada Kismaayo ayaa lagu qabtay labo kamid a shabakada katirsan […]
August 22, 2019 Puntland Mirror 0
Kismaayo-(Puntland Mirror) Baarlamaanka maamul goboleedka Jubbaland ayaa maanta oo Khamiis ah Axmed Maxamed Islaam dib ugu doortay madaxweynaha afarta sanno ee soo socota. Axmed oo oo loo yaqaan Madoobe waxa uu helay 56 cod, halka […]
July 13, 2019 Puntland Mirror 0
Kismaayo-(Puntland Mirror) Ugu yaraan 13 qof ayaa la xaqiijiyay in ay ku dhinteen weerar lagu qaaday huteel kuyaala magaalada Kismaayo. Huteelka la weeraray oo la dhaho Cascasey ayaa markii hore gaari laga soo buuxshay walxaha […]
May 2, 2019 Puntland Mirror 0
Kismaayo-(Puntland Mirror) Madaxweynaha maamul goboleedka Jubbaland ayaa rajo ka muujiyay shirka lagu balansanyahay Garoowe ee u dhaxeeya dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada. Isaga oo ka hadlayay magaalada Kismaayo maanta oo Khamiis ah, Axmed Maxamed […]
October 15, 2018 Puntland Mirror 0
Muqdisho-(Puntland Mirror) Afar dagaalyahan oo katirsan Al-Shabaab ayaa lagu dilay duqeyn uu Mareykanku ka fuliyay gudaha Soomaaliya. Taliska Mareykanka ee Afrika, U.S. AFRICOM, ayaa bayaan ku sheegay in duqeyntu ay Isniintii ka dhacday meel u […]
September 18, 2018 Puntland Mirror 0
Kismaayo-(Puntland Mirror) Dagaal culus oo u dhaxeeya ciidamada maamul goboleedka Jubbaland iyo maleeshiyada Al-Shabaab oo Isniintii ka dhacay gobolka Gedo ee koonfurta Soomaaliya, ayaa waxaa ku dhimatay 16 qof oo katirsan dhinacyada dagaalamay, sida ay […]